Ubhekane nemibuzo enzima uMaimane ezokhankasa eKZN | News24
Ubhekane nemibuzo enzima uMaimane ezokhankasa eKZN
Durban – Umholi weDemocratic Allaince uMmusi Maimane uthwale kanzima ngesikhathi evakashele eNquthu entshonalanga neKwaZulu-Natal ngoLwesithathu njengengxenye yomkhankaso weqembu ngaphambi kokhetho lokuchibiyela ngesonto elizayo.
INkosi yendawo, uFisukwazi Praisegod Hlatshwayo, umamukele uMaimane kodwa wamupheka ngemibuzo enzima mayelana nokuthi iDA yini eyenzela abaholi bendabuko kanye nokuthi leli qembu yini elingayenza uma lingase lingene kuhulumeni.
“Empeleni, ngifuna ukwazi ukuthi yini eyokwenzeka ebuholini bendabuko uma ngabe iDA iwina? Futhi kuzokwenzakalani ngodaba lomhlaba?” ubuze kanjalo ngaphandle kokugwegweza.
OLUNYE UDABA: UMaimane usephumele obala ngokuthi uzizwa kanjani ngombhalo kaZille
UMaimane uphendule ngokuthi iqembu lizolandela uMthethosisekelo wezwe odabeni oluthinta ubuholi bendabuko.
Kodwa-ke iNkosi Hlatshwayo ayizange ize igculiseke neze yile mpendulo kaMaimane.
INquthu yiwona kuphela umasipala ezweni owahluleka ukukhetha imeya kanye nabanye abaholi ngemuva kokhetho lohulumeni basekhaya olwalungo-Agasti ngonyaka odlule.
“Angeke kwenzeke ngaphansi kweDA ukuthi angeke siwahloniphe amakhosi,” kusho uMaimane, engeza ngokuthi leli qembu lizoqinisekisa ukuthi kuba nokumeleka ngendlela efanele kwamakhosi kuhulumeni futhi “lizolalela kakhulu abaholi bendabuko”.
Kodwa-ke uHlatshwayo uqhubekile nokugcindezela, wabuza ukuthi kungani iDA ingakaze ixhumane namakhosi endabuko noma isho noma ngabe yini kuwona ngaphambilini.
Kuze kwangenelela umholi weDA esifundazweni, uZwakele Mncwango, nothe leli qembu kunezinhlelo eselizibekile ukuze lixhumane kahle namakhosi.